Nhau dzeBhaibheri: Kusika Kusvikira Kumafashamo - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Ko matenga napasi zvakabva kupi? Ko zuva, mwedzi nenyeredzi, uyewo nezvinhu zvizhinji zviri pasi pano, zvakavapo sei? Bhaibheri rinopa mhinduro yechokwadi parinoti zvakasikwa naMwari. Nokudaro bhuku redu rinovamba nenhau dzeBhaibheri dzinoreva nezvokusika.
Tinodzidza kuti zvisikwo zvokutanga zvaMwari zvaiva vanhu vokumudzimu vakati fananei naye amene. Zvaiva ngirozi. Asi pasi rakasikirwa vanhu vakadai sesu. Nokudaro Mwari akaita murume nomukadzi vainzi Adhama naEvha ndokuvaisa mubindu rakaisvonaka. Asi havana kuteerera Mwari uye vakarashikirwa namaruramiro okupfuurira kurarama.
Ose, kubvira pakusikwa kwaAdhama kusvikira Kumafashamo makuru, paiva namakore 1 656. vanhu vazhinji vakashata vakararama munguva iyi. Mudenga, maiva navanhu vasingaoneki vokumudzimu, Satani nengirozi dzake dzakashata. Pasi pano, paiva naKaini navamwe vanhu vazhinji vakashata, kubatanidza navamwe vanhu vechienzi vane simba. Asika pasi pano paivawo navanhu vakanaka--Abheri, Enoki naNoa. Muchikamu CHOKUTANGA ticharava nezvavanhu vose ava nezvinoitika.